Ngaba iBhayibhile ithi sifanele goca iingalo zakho uze uvale amehlo akho xa sithandaza? | Apg29
Okanye yeyona ndlela iqhelekileyo ukuba ubuze likhohlakele?
Xa uYesu othetha nalo mbuthi werhafu ukuze wawaphakamisa amehlo akhe ezulwini xa wacela uThixo ngenxa yenceba nemfesane. Kwakutheni ukuze uYesu iinkcukacha? Ngenxa yokuba wayeqhele ukuthandaza kunye amehlo jika bhakabhaka!
Masenze ukusungula ngoko nangoko:
Akukho mzekelo yeBhayibhile ukuba bathandaza ngezandla isongwe, akukho umzekelo Bewacima namehlo abo ngomthandazo! Ngoko phi na kukuba kufuneka snap izandla zabo, uvale amehlo akho xa uthandaza? Ewe, akukho iBhayibhile!
Njani uYesu eBhayibhileni?
Yohane 11:41. Balisusa ngoko ilitye apho abelele khona ofileyo walala. Ke kaloku uYesu wawaphakamisela amehlo akhe waza wathi: Bawo, ndiyabulela kuwe kuba undivile.
Xa uYesu wabonga uYise, wawaphakamisa amehlo akhe. Wathandaza evulekileyo ngamehlo!
Kukho omnye umzekelo ngakumbi yeVangeli kaYohane ngoYesu bönesätt:
UYohane 17: 1 Waza uYesu, wawaphakamisa amehlo akhe wakhangela ezulwini , wathi, Bawo, lifikile ngoku ixesha. Mzukise uNyana wakho, ukuze noNyana wakho akuzukise;
UYesu wawaphakamisela amehlo akhe ezulwini xa ethandaza. Ngoko ke sibona ngokucacileyo ukuba nengcindezelo ukuthandaza ngamehlo abo evulekile! Ngoko kutheni ungazami sithandaze ngendlela yeBhayibhile? Ixesha elizayo uthandaza, phakamisa amehlo akho isibhakabhaka! Sithandaze ngendlela uYesu!
UYesu wayesoloko Wawaphakamisa amehlo akhe ezulwini, ngokunjalo nayo okwezonka;
UMateyu 14:19. Waza ke wayalela abantu ukuba bahlale phantsi engceni. Wazithabatha ke izonka zozihlanu neentlanzi zombini, wathi, ekhangele ezulwini , wasikelela, waziqhekeza izonka, wanika abafundi bakhe, baza bazabela abantu.
Makhe sibone ukuba omnye umzekelo.
Luka 18:13. Kodwa yena umqokeleli werhafu wayemi kude kude kwaye ubengayi amehlo akhe ezulwini, kodwa ukubetha esifubeni sakhe, esithi, Thixo, yiba netarhu kum, mna moni.
1 Tim 2: yesibhozo Ke ngoko, ndibamba kuyo yonke indawo amadoda kufuneka sithandaze, ephakamisa izandla ezingcwele, engenangqumbo, kwamathandabuzo.
UPawulos ufuna ukuba bathandaze kunye ngezandla livunyelwe. Uthi nto malunga baqubuda, babambelela. Isizathu soku kukuba vanligate ndlela sithandaze kunye izandla. Kodwa ubani ngokwesithethe umntu ukuba snap izandla zabo? Hayi, ukuba eBhayibhileni kuzo zonke iimeko.
INdumiso 141: 2: "Makhe umthandazo wam esebenzayo phambi kwakho isiqhumiso, ephakamisa izandla zam kube ngumnikelo wangokuhlwa."
Lamentations 3:41: "! Masizinyuse iintliziyo zethu kunye nezandla zethu kuThixo emazulwini"
Last quote bible, siyabona ukuba le khosi iya kuba iintliziyo zethu apho xa izandla zethu kuThixo.
IBhayibhile isifundisa, ngoko Akazifumana izandla zethu namehlo kuThixo xa sithandaza kuye. Yeyona ndlela yeBhayibhile.